मनोरञ्जन Archives | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
बलिउड सुपर स्टार सलमान खानको हरेक चलचित्र ब्लकवस्टर हुने गर्दछ । उनका चलचित्रको पर्खाइमा उनका दर्शकहरु निकै उत्साहित भएर पर्खने गर्दछन् । तर उनको केहि समय पछि नै रीलिज हुन लागेको फिल्म ‘टाइग... Read more
गीत ‘कुटुमा कुटु’ले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। फिल्म ‘२ रुपैयाँ’मा समावेश गरिएको यस गीतको भिडियोले युट्युवमा ४ करोड बढी भ्युअर पाएको छ । यो नेपाली युट्युवमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्युअर स‌ंख्या हो... Read more
यौन सम्बन्ध बनाई रहेको अवस्थामा दुई जना अभिनेत्रीलाई हैदरवाद प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हैदरवादको उतरी जोनमा रहेको बंजरा पाँच तारे होटलबाट प्रोष्टीच्युशन रकेट चलाईरहेको सुचनाका आधारमा प्रहरी... Read more
मानिस उसको कर्म अर्थात कामका आधारमा बाँचेको हुन्छ । कर्मले नै मानिस सुखी हुने वा दुःखी हुने, सफल हुने कि असफल हुने जस्ता कुराको निर्धारण गर्छ । सबै धर्मले पाप गर्दा नर्कमा जाने उल्लेख छ । गर... Read more
पोर्न उद्योगमा झड्का, यी स्टारको कसरी भयो रहस्यमय मृत्यु ???
काठमाडौं । पोर्न फिल्म उद्योगमा अर्को एउटा झड्का लागेको छ । केही समय अगाडी एडल्टस्टार अगस्त एम्सले आत्महत्या गरेकी थिइन् । अहिले ३१ वर्षीया यूरिजन बेल्ट्रनका जसलाई युरी लभका नामले पनि चिनिन्... Read more
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानसँग फिल्म खेल्न अभिनेत्रीहरुको लाइननै लाग्ने गर्छ । सलमानले धेरै अभिनेत्रीलाई बलिउडमा स्थापित समेत गराइसकेका छन् । त्यस्तै केही अभिनेत्री भने उनीसँग देखिएपछि गुमनामज... Read more
कंगना तनाबमा !!!
यस वर्षको सुरूवातदेखि नै कंगना मिडिया अन्तरवार्ताहरू आगो बनेर आइन्। बलिउडमा रहेको परिवारवाद र आफूमाथि भएका दुर्व्यवहारका बारेमा उनले बोलेपछि उनको चौतर्फी कडा आलोचना भएको थियो। ऋतिक रोशन तथा... Read more
रणबीरले हद नाघेपछि…
करण जोहरले आफ्नो शो ‘कफी विथ करण’मा सेलिब्रेटीहरुको पोल खोल्ने गरेका छन् । यसमा उनी अतिथिसँग उनीहरुका निजी जीवनका विभिन्न पाटाहरुलाई लिएर कुराकानी गर्छन् । यसैबीच हालै उनले अभिनेता रणबीर कपू... Read more
‘पद्मावती’ विवादलाई लिएर यसो भन्छिन् कंगना…
बलिउड फिल्म ‘पद्मावती’को हालसम्म पनि विरोध भइरहेको छ । जसकारण फिल्मको रिलिज डेट समेत पर सार्नुपर्‍यो । दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर र रणवीर सिंह स्टारर फिल्मको रिलिज डेट हालसम्म पनि तय हुन सके... Read more
किन सबैको अगाडि हप्काए अमिताभले ऐश्वर्यालाई ???(भिडियो सहित)
रजनीकान्त जस्ता सुपर स्टारको मन जित्न सफल ऐश्वर्या राय बच्चन यस्ती अभिनेत्री हुन् जसले आफ्नो फिल्मी करियरलाई मात्र होइन निजि जीन्दगीलाई पनि उीत्तकै महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेकी छिन् । एक बच्च... Read more